Kooxda Manchester United oo ka jawaabtay hadalkii maanta ka soo yeeray Paul Pogba – Gool FM
Kooxda Manchester United oo ka jawaabtay hadalkii maanta ka soo yeeray Paul Pogba
(Manchester) 16 Juunyo 2019. Manchester United ayaa la soo warinayaa inay u sheegtay Paul Pogba inaan la iibin doonin inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha xagaagan iyadoo ka jawaabaysa hadalkii maanta la soo yeeray laacibkan.
Waxaa jiray warar isdaba joog ah oo ku saabsan mustaqbalka 26-sano jirkaan, kaasoo xilli ciyaareedkiisii saddexaad ku soo laabtay garoonka Old Trafford.
Real Madrid iyo Juventus ayaa si xoog leh loola xiriirinayey xiddiga ku guuleystay Koobka Adduunka, waxaana ay u muuqatay in kooxahan la siiyay dhiiri-gelin ay ku doonaan saxiixa xiddigan reer France kaddib markii uu sheegay maanta oo Axad ahayn inuu diyaar u yahay inuu ka tago Man United si uu tartan cusub uga sameeyo meel kale.
Yeelkeede, Shabakadda London Evening Standard ayaa warinaysa in Manchester United ay ku adkeysanayso in Paul Pogba uu baaqi kusii ahaan doono kooxda ugu yaraan xilli ciyaareed kale.
Kubbad abuurahan ayaa weli heshiiskiisa waxaa kaga harsan labo sanadood oo kale, kaasoo lagu kordhin karo 12 bilood oo dheeraad ah haddii Man United ay dooneyso inay u dheereyso qandaraaskiisa.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya inuu dib u qaabeeyo kooxdiisa ka hor xilli ciyaareedka cusub, inkastoo aysan kala caddeyn weli halka uu Pogba ka ciyaari doono kal ciyaareedka cusub, balse Man United waxa ay ku adkeysanaysaa inuu sii joogi doono laacibkan ugu yaraan xilli ciyaareed kale.
Madaxweynaha PSG oo si adag ula hadlay xiddigaha Neymar Jr iyo Kylian Mbappé